“Hadaan Ahey Xasan Shekhii Xaley/Shaley” Aawey Xalaafkii Aan Sitey? (Qormo) – Radio Daljir
“Hadaan Ahey Xasan Shekhii Xaley/Shaley” Aawey Xalaafkii Aan Sitey? (Qormo)
Oktoobar 20, 2018 4:26 g 3
Waxaan maal mahaan ka daawadey baraha bulshada wareysiyo dhowr ah uu Madaxweynahii hore Hassan Sheikh kaga hadley waxa ku kalifey in xukumadii badashey isaga mudo yar (18 ) bilood gudahood uu xisbiyadii mucaaradka ahaa isku duba-rito. si xumada Nabad Iyo Nolol loo wiiqo iyo sababta waqtig aan wali doorasho dhaweyn u door bidey in mar kale si deg deg ah siyaasada wadanka ugu soo laabto? halka madaxweynahii isaga ka horeeyey uu siiyey waqti ilaa doorashada dambe la soo gaadhey. Su’aalahaas iyo oraah-yadaasi waxey qayb ka ahaayeen wixii wareysigiisa iiga baxey.
Marka laga yimaado hanka siyaasadeed ee Hassan Sheikh iyo in uu yahey qof muwaadin ah xaqna u leh in xilka wadanka mar kale haweeysto hadana taariikhdii waxqabad ay Hassan Sheikh (Track Record) intuu xilka hayey iyo marxaladaha siyaasadeed ay wadanku soo marey wali xasuusta dadka soomaaliyeed ayee ka qo’yantahey.
Daraasaad koban aan ku sameeyey damaca iyo xisbiga Hassan sheikh gudoomiyaha ka yahey xiligaan (MNH) iyo siyaasiyiinta aan ku cusbeyn maslaxa siyaasada wadanka ee ka dhex muuqda ayaa waxaan ku milsaaleeyey sheekadaan.
Hada kahor ayaa nin reer-miyi ah oo safar ah reer soo martiyey waqti fiid ah, ninku wuxuu sitey buraashad iyo sali ama sujaayad laga sameeyey coos iyo mayrax loona yaqaaney waqtigaas (Xalaaf)
Sidii dhaqanka soomaaliga aheyd ayaa loo soor-yeeyey neef ari ayaa isla markiiba dhegta dhiiga loo darey bariis iyo caano waa loo diyaariyey.
Subaxdii ayuu jarmaadey si meeshii uu doonaayey u gaaro waqti hore, balse waqti ay qoraxdii ku kulu laatey kala badhkana marayo marka laga fiidhsho masaafada socodkiisa halka uu rabo in uu caawa gaadho iyo reerkii uu xaley la hoydey ayuu ninkii safarka ahaa durbadiiba go’aansadey in caawa gaadhi karin reerka uu kusocdo balse ay tahey in uu dib ugu laabto reerkii xaley martigeliyey maadaama ay tahey cida kaliya ay ugu dhow.
Markii uu reerkii ku soo dhawaadey ayuu saligii xalaafka ahaa geed kusoo qariyey si aan loo fahmin in uu yahey ninkii xaley reerka soo martiyey.
Jihadii uu xaley reerka kaga yimi, jiho kale ayuu ka soo galey waqtigii oo kale. bacda bariisamo kadib, dabcan reerkii kuma farxin in hadana caawa uu nin kale usoo martiyo xaalada reerka oo aan xoolo badan heysan awgeyd.
Ardaaga reerka ayaa go’gal loo dhigey shaah iyo biyo-weyso ah na gabadh yar ayaa loogu dhiibey. Odeygii iyo islaantii reerka oo waqtigaas ku mash quulsanaa xoolahii yaraa xareyntooda ayaa ka shoorayey bal wixii ay ninka socotada ah caawa siin la haayeeyn.
Gabadhii yareyd ee loogu dhiibey shaaha ayaa garatey ninkii oo mar kaliya qaylo afka furatey oo tidhi “Hooyoo iyo aaboo ninku waa ninkii xaley noo martiyey”
Inta aysan wali hadlin labadii waalid ay gabadha yar dhaley ayuu ninkii kor u qayliyey oo yidhi “Hadaan Ahey Ninkii Xaley/shaley idiin Martiyey Aawey Xalaafkii Aan Sitey”
Hadaba ma’istidhi akhristoow Hassan Sheikh qudhiisu xalaafkii ayuu soo qarsadey ee waa isla Hassan Sheikhii shaley aan iska hor leexiney.
W/Q Asadnaa Suudi.
Falaanqeeye siyaasadda Soomaaliya.
Gaas oo Garowe Kusoo dhoweeyey Madaxweynayaasha Maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed (Sawiro)
Qarad 2 years ago
Qormadaan caadi ma ah xigmad ayey xambaarsantahay
Nasriin sweaty 2 years ago
Qormadaan Hassan Sheikh nabar xaqdaro allah ha’uga dhigo! Akhrinta qormadaan waan ka dhergi waayey waadna ku mahadsantiin Bahda Daljir iyo qoraagu. Well article.
Yaasmiin kaysar 2 years ago
Kkkkkkk, inaba caadi maaha maqaalkaan. Hade noqonlaheyd sarbeebta nuxurka hadalka ku jirta iyo dhinaca qosalka. Qoraagu waa waayo arag culus waqti hore ayaa noogu dambeeysey qormooyinkiisa ee Asadnaa Suudi qoraa horey usoco waan ku taageersanahey!